कस्ती हुन्छिन् सच्चा प्रेमिका ? यसरी जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
कस्ती हुन्छिन् सच्चा प्रेमिका ? यसरी जान्नुहोस्
कस्ती हुन्छिन् सच्चा प्रेमिका ? केही यस्ता टिप्स दिँदैछौं जसका कारण केटाहरूले सच्चा प्रेमिका चिन्न सक्छन् । सँगै जीवन बिताउनका लागि कुन केटी उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि उनीहरूले थाहा पाउँछन् ।
प्रेम पनि आजकल एउटा फेशन जस्तो भएको छ । युवक र युवती दुवैले कुन बेलामा आफ्ना पार्टनर परिवर्तन गर्छन् थाहै हुँदैन ।
तपाईंलाई वास्ता गर्ने, मान्ने र तपाईंविना बस्न नसक्ने, तपाईंले खाना खानुभएको कि भएन भनी सोध्ने प्रेमिका सच्चा हुन् । तर धेरैजसो केटाहरू ‘कस्ती चिपकू केटी रहिछ’ भनेर छोडिदिन्छन् ।
जसको मन सफा हुन्छ र जसले आफ्नो कुरा प्रस्ट रूपमा राख्छन्, त्यस्ता केटीहरूले प्रायः प्रेमीसँग झगडा गर्छन् । केटाहरूले यस्ता केटीलाई छोडिदिन्छन् । तर यही लडाईं झगडा पछि गएर खुब याद आउँछ । कुरा चपाउने केटीहरू षड्यन्त्रकारी हुन्छन् र प्रस्ट बोल्ने केटीले तपाईंको जीवनमा ठूलो उपलब्धि दिलाउँछन् ।
प्रेमिकाले तपाईंसँग बिहे गर्छु भन्छिन् भने थाहा पाउनुस् उनी तपाईंसँग सच्चा प्रेम गर्छिन् र सारा जीवन तपाईंसँगै बिताउन चाहन्छिन् । तर प्रायः केटाहरू बिहेको कुरा सुन्नेबित्तिकै भाग्छन् र सम्बन्ध अन्त्य गरिदिन्छन् । बिहे गरेपछि केटीले केटाका आमाबुवासँगै बस्न तयार भइन् भने त्यस्ती केटीले परिवार राम्ररी सम्हाल्छन् । यस्ती केटीलाई कहिलेपनि नछोड्नुस् ।
Topics #प्रेमिका #सच्चा
Don't Miss it तपाईको दांतको बिचमा खालि भाग छ भने, यस्तो हुन्छ तपाईको भाग्य !
Up Next अजिना प्रयाेग हुन सक्छ घातक , यस्ता छन् यसका बेफाइदा!
केही यस्ता खानेकुरा, जसलाई सँगसँगै खानुहुँदैन
१. दूधसँगै कहिले पनि कागती वा अमिलो सुन्तला खानुहुँदैन । यदि सँगै खाइयो भने यसले एसिडिटी (ग्यास्ट्रिक) बढाउन सक्छ ।…
तपाई को स्वास्थ्य राम्रो छ या नराम्रो कसरि अहुमान गर्ने ??
राम्रो स्वास्थ्यका संकेत १. राम्ररी भोक लाग्नु, भोक लाग्दा सादा र सात्विक खाना खाने इच्छा हुनु । २. प्यास लाग्दा…
कुन रोगका लागि सहयोगी बन्छ अंगुर ? जान्नुहोस
माइग्रेनमा – अंगुरको जुस माइग्रेनमा उपयोगी मानिन्छ । यसका लागि पानी नमिसाइकन बिहान सबेरै जुस पिउनुपर्छ । कब्जियत – अंगुरले…